बाईबाई पेट्टी- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २०, २०७४ हिमेश
काठमाडौं — अमेरिकी संगीतकार, गायक र गीतकार टम पेट्टीको निधन निकै अप्रत्याशित रह्यो । विश्वास नै गर्न नसकिने । सुरुमा उनलाई हृदयाघात भएको थियो भनियो । पछि मृत्युको अपुष्ट समाचार पनि आयो । फेरि अर्को समाचार आयो, होइन, उनी जीवित नै छन् ।
तर अन्त्यमा जुन समाचारलाई लिएर डर थियो, त्यही भयो । पेट्टी साँच्चै रहेनन् । केही समयका लागि पेट्टीका प्रशंसक अन्योलमा रहे, तर उनको परिवारले अन्त्यमा पुष्टि गरेको थियो, उनको निधनलाई ।
उनी नेपालमा कति लोकप्रिय छन्, त्यसलाई नाप्ने औजार छैन । तर कुनै समय उनका गीत काठमाडौंतिर खुबै राम्रोसँग सुनिन्थे, सन् ९० अगाडिसम्म । सन् १९५० को अक्टोबरमा उनको जन्म भएको थियो, फ्लोरिडामा । उनी ६६ वर्ष बाँचे । उनकै नाम अगाडि आउने गरेर ब्यान्ड बनाइएको थियो, टम पेट्टी एन्ड द हर्टब्रेकर्स । उनी यस ब्यान्डका फ्रन्टम्यान थिए । उनका केही गीत सोलो आर्टिस्टका रूपमा पनि रहेको छ ।
उनको खास ख्याति भने सन् ८० को सुपर ब्यान्ड ट्राभलिङ विलबरिजबाट रहेको हो भन्दा पनि फरक भने पर्दैन । यसको अर्थ टम पेट्टी एन्ड द हर्टब्रेकर्सलाई कम आँक्ने पनि होइन । ट्राभलिङ विलबरिज वास्तवमै सुपर ब्यान्ड थियो । नहोस् पनि किन ? यस ब्यान्डका सदस्य थिए, बब ड्यालन, जर्ज ह्यारिसन, जेफ लेन, रोय ओरबिसन र तिनै टम पेट्टी । यति नाम चलेका व्यक्तित्व कुनै एक ब्यान्डमा समेटिन सक्छ र ? धेरैको प्रश्न यस्तै रहने गथ्र्यो ।
साँच्चै यो ब्यान्ड धेरै वर्ष टिक्न सकेन । खालि सक्रिय रह्यो, सन् १९८८ देखि १९९० सम्म मात्र । तर जति उनीहरू सँगै रहे, विश्व संगीतले सुन्न पायो, केही महान् गीत । ब्यान्डले खालि दुई एल्बम मात्र निकाल्यो । तर दुवै उत्तिकै चर्चित रहे, उत्तिकै मनपराइए पनि । सन् १९८८ मा उनीहरूले जारी गरेको गीत हो, ‘ट्वीटर एन्ड द मन्की म्यान’ । हाम्रोतिर पनि खुबै लोकप्रिय रहेको गीत हो । एकक्षण फुर्सद निकालेर यो गीत सुन्ने हो भने खुबै मज्जा आउने गर्छ ।
पेट्टीका अधिकांश गीत या त रक एन्ड रोल रहे, होइन भने रक । उनको व्यक्तित्वमा अरू नाम चलेका गायकको जस्तो जादुयी छनक पाइन्न । उनी प्राय: सामान्य देखिन्छन् । अझ धेरै अवसरमा त कन्ट्री सिंगर जस्तो । तर उनको आवाजमा जादु प्रस्ट सुन्न सकिन्छ । त्यसैले उनी पनि सबैभन्दा एल्बम बिक्री हुने कलाकारमध्येमा एक पर्छन् । सन् २००२ मा त हो, उनलाई ‘रक एन्ड रोल हल अफ फेम’ राखिएको । यो उनका लागि पनि ठूलै उपलब्धि थियो ।
दस वर्षको उमेरमा उनले एल्भिस प्रिस्लेलाई भेटेका रहेछन् । त्यही अवसरमा पेट्टीले निर्णय गरे– आफू पनि यही क्षेत्रमा लाग्छु । सन् १९७६ मा उनले टम पेट्टी एन्ड द हर्टब्रेकर्स ब् यान्ड बनाए । रक ब्यान्डका रूपमा यसले उत्तिकै ख्याति पनि कमायो । केही सिनेमा पेट्टीले अभिनय पनि गरे । खासमा उनको मृत्यु यति धेरै किन अप्रत्याशित रह्यो त ? हिजो जस्तै हो, उनले आफ्नो पछिल्लो कन्सर्ट गरेको । मृत्युको सात दिन अगाडिसम्म पनि स्टेजमै व्यस्त थिए ।
उनले पछिल्लोपटक गाएको लस एन्जलसमा थियो र यससँगै समाप्त भएको थियो, उनीहरू अर्थात् टम पेट्टी एन्ड द हर्टब्रेकर्स ब्यान्डको ५३ दिन लामो टुर । अन्तिम कन्सर्टको अन्तिम गीत थियो, उही ‘अमेरिकन गर्ल’ । उनी लगभग अधिकांश कन्सर्टको अन्त्य यही गीतबाट गर्थे र लस एन्जलसको कन्सर्ट पनि अपवाद रहेन । उनको सबैभन्दा मन पराइएको गीत हो, यो । यससँगै उनको अर्को निकै लोकप्रिय गीत रहेको छ, ‘फ्रि फलिङ’ ।
कन्सर्टमा मात्र उनले अमेरिकन गल्र्स सात सयपल्ट गाइसकेको छ भनिन्छ । ‘ट्वीटर एन्ड द मन्की म्यान’ सँगै यी दुई गीत दोहोर्‍याएर सुन्दा अझ मीठो लाग्नेछ । यहाँनिर उत्तिकै उल्लेख गर्न लायक तथ्य के पनि हो भने टम पेट्टी एन्ड द हर्टब्रेकर्स ब्यान्ड टुरकै क्रममा आफ्नो ब्यान्ड स्थापनाको ४० वर्ष पनि मनाइरहेका थिए । त्यसैले टुर सुरु हुन अगाडि पेट्टीले भनेका थिए, हाम्रा लागि यो निकै
सम्झनालायक हुनेछ । नभन्दै यस्तै भयो, तर दु:खान्त रूपमा । तस्बिरहरु: एजेन्सी
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ ०९:४७
चुनौती नै अवसर
काठमाडौं — हरेक क्षेत्रमा युवा सहभागिता बढ्दो छ । फरक/फरक क्षेत्रमा लागेर रमाउने युवा जमात्को कमी छैन । अवसरलाई उपयोग गर्न युवा पुस्ता अग्रसर छन् । कठिन नै भए पनि चुनौती सामना गर्न तयार हुन्छन् ।
त्यसैले युवा पुस्ता लिडरका रुपमा चर्चित हुन थालेका छन् । जहाँ युवाले नेतृत्व गर्छ, त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने नारा नै चलेको छ । चितवनमा नेतृत्व तहमा काम गरिरहेका ६ युवाबारे विमल खतिवडा लेख्छन् :
अहिलेसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्न गाह्रो भएको छैन । सबैले सम्मान गर्ने पेसा भएकाले होला, धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।
भरतपुर ४ वैदिकनगरकी बबिता घिमिरे चितवन मेडिकल कलेजमा आईसीयू इन्चार्ज हुन् । उनीसहित दुई इन्चार्ज रहेको यसमा ३० जना स्टाफ कार्यरत छन् । उनी प्राय: ११ बजेदेखि ७ बजेसम्म काम गर्छिन् । ‘कहिलेकाहीँ स्टाफ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर पेसाप्रति सन्तुष्ट छु, रिस्क नलिए केही पनि गर्न सकिँदैन ।’ परिवारको चाहना उनले एमबीबीएस गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो । नर्स भए पनि उनलाई परिवारले राम्रै साथ दिएको छ ।
‘विदेश जाने सोच छैन,’ २७ वर्षीया बबिता भन्छिन्, ‘आफ्नै देशमा बसेर बिरामीको सेवा गर्न चाहन्छु । आफंैले नेतृत्व गरेर काम गर्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ ।’ उनी बेस्ट नर्सिङ स्टाफको अवार्ड पनि जितेकी छन् । ‘नेतृत्व लिएपछि त्यसलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ तर अहिलेसम्म मैले जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकी छु,’ उनले भनिन् ।
चितवन निकुञ्जअन्तर्गत सौराहा सेक्टरका प्रमुख अभिनय पाठक निकै व्यस्त हुन्छन् । जुनसुकै बेला र परिस्थितिमा पनि काममा खट्छन् । उनले यस कार्यालय सम्हालेको दुई वर्ष भइसक्यो । ‘सुरुमा कार्यालय प्रमुख भएर आउँदा मलाई कर्मचारीहरूले समेत पत्याएनन्,’ २७ वर्षीय उनले भने, ‘पछि सबैले चिन्दै गए, उमेर सानो भए पनि जिम्मेवारी ठूलै छ ।’ राप्ती नगरपालिका ६ स्थित आदर्श टोलका उनी ६७ कर्मचारीका हाकिम हुन् ।
शिक्षक दम्पतीका अभिनयले दोस्रोपल्टको लोकसेवा परीक्षामा २ नम्बरमा नाम निकालेका थिए । पोखराको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट फरेस्ट्रीमा बीएस्सी गरेका उनी कार्य अनुभव सुनाउँछन्, ‘पहिला कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाउँदा के बोल्ने, कसरी बोल्ने भन्ने डर हुन्थ्यो । बल्ल अचेल कन्फिडेन्स बढेको छ, बोल्न सक्ने भएको छु ।’ उनी आफ्नो गाउँबाट अधिकृतमा नाम निकाल्ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
‘चितवन निकुञ्जको अन्य क्षेत्रभन्दा यो सेक्टरमा चहलपहल बढी छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला कार्यक्रम यहीं हुन्छन् । राति गस्ती हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई बढी सचेत भएर हेर्नुपर्छ ।’ कामको चापले नै उनी नजिकैको घर पनि दुर्लभै जाने गर्छन् । वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एन्ड म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गर्ने लक्ष्य राखेका उनको मोबाइल पनि निकै व्यस्त हुन्छ ।
बीपीएच (ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ) गरेकी भरतपुर १६ स्थित विजयनगरकी प्रमिता ढकाल अहिले मास कम्युनिकेसनमा मास्टर्स गर्दैछिन् । जति पढाइ, त्यति नै उनको व्यस्तता बढ्दो छ । २७ वर्षीया उनी स्थानीय क्रिस्टल टेलिभिजनमा समाचार संयोजक हुन् । उनको नेतृत्वमा पहिले २४ जनाले काम गर्थे, अहिले आठ जना छन् । उनी समाचार संकलनदेखि प्रस्तुत पनि गर्नेसम्म काम गर्छिन् ।
‘मिडियामा लागेपछि सबैले चिन्ने भएकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘ढुक्क भएर काम गर्ने भएकी छु ।’ उनी तलब पाउनसाथ बा–आमालाई उपहार लिएर जान्छिन् । ‘अहिलेसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्न गाह्रो भएको छैन । सबैले सम्मान गर्ने पेसा भएकाले होला धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले दशकयताको अनुभव सुनाइन्, ‘तर महिला पत्रकारलाई हेप्ने प्रवृत्ति देख्दा भने दु:ख लाग्छ । पुरुषसरह काम गर्दा पनि महिला पत्रकार भनेपछि हाम्रै समाजमा नाक खुम्च्याउने चलन छ । तर मैले हिम्मत हारेकी छैन ।’
अहिलेका युवा पुस्ता जति गाह्रो काम त्यति नै इन्जोए गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्ने गर्छन् । यो कुरा गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका २ खरिबोटका कुश सापकोटामा पनि लागू हुन्छ । २७ वर्षीय उनी सौराहाको होटल पार्कसाइडका म्यानेजर हुन् । होटलको लेखा पनि उनी आफैं हेर्छन् । बीबीएस पास गरेका उनको चाहना बिजनेस गर्ने हो, अहिले भने म्यानेजरको जिम्मेवारी सम्हाल्न व्यस्त छन् । ‘कामप्रति सन्तुष्ट छु र यसैको कमाइले चितवनमै जग्गा पनि जोडेको छु,’ २२ कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिरहेका उनले भने । पाहुनालाई सत्कार गर्नेदेखि लिएर अरू काममा उनी बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्मै खटिरहेका भेटिन्छन् ।
भरतपुर १९ शारदानगरकी विन्दु भण्डारी भेटनरी डाक्टर हुन् । तर उनी जलवायु परिवर्तनको अभियन्ता बनेकी चार वर्ष भइसक्यो । २४ वर्षीया उनी ‘क्लाइडमेट्स’ की उपाध्यक्ष हुन् । यो संस्थामा ३० देशका ४ सय युवा सक्रिय सदस्य छन् । त्यसको नेपाल शाखाका रूपमा यही वर्ष (सन् ०१७) मा क्लाइडमेड्स नेपाल बनेको हो । यसको बोर्डमा १३ जना र पूरा संस्थामा १ सय ५ सदस्य छन् । विन्दुले संस्थामा मेन्टरको काम गर्छिन् ।
उनले सुरुमा अभियानमा आवश्यक खर्च जुटाउन पार्ट–टाइम टिचिङ पनि गरेकी थिइन् । ‘सामाजिक काममा सक्रिय छु,’ उनी भन्छिन्, ‘छोरीले उदाहरणीय काम गरेको भनी बा–आमा पनि दंग छन् ।’ अभियानकै सिलसिलामा उनी अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, मोरक्को र भारत पनि पुगेकी छन् । काम र अभियानलाई सँगै अगाडि बढाउने उनको योजना छ ।
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका १ नेपालेडाँडाका निरञ्जन भट्टराईले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का रूपमा सात महिनायता भरतपुरको १० नम्बर वडा प्रहरी कार्यालय सम्हालिरहेका छन् । २७ वर्षीय उनको कमान्डमा ७१ जना प्रहरी छन् । फिजिक्समा मास्टर्स सकाएका उनले भने, ‘सानैदेखिको रहर फौजीमा छिर्ने थियो । त्यो सपना साकार भएको छ ।’ उनको काम समाजमा शान्ति स्थापना गर्नु हो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ उनको टोली तुरुन्तै पुग्ने गर्छ । चाडबाडमा पनि बिदा मिलेमात्र उनी घर पुग्छन् । ‘प्रहरीमा लागेपछि निडर भएको छु,’ शिक्षकका यी सन्तानले भने, ‘चौबिसै घण्टा आफ्नो क्षेत्रको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ ।’
गाइडको मुन्धुम मोह
ट्रम्पले रोके क्वालकमको बिक्री
बिग फाल्कन रकेट अर्को वर्ष